VaChinamasa Vanoti Sarudzo Dzichaitwa Munzvimbo Dzose Dzisina Vamiriri
Gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vanoti nyika iri kutsvaga mari inosvika madhora mamiriyoni makumi mana nemasere yekuita sarudzo munzvimbo makumi matatu nesere dzeseneti nedare reHouse of Assembly. Sarudzo idzi dzinonzi dziri kuda kuitwawo munzvimbo dzinodarika mazana maviri mumakanzuru emumaruwa nemumadhorobha sezvo dzisina vamiriri pari zvino nekuda kwerufu nezvimwe zvikonzero.
Svondo rapera, dare repamusorosoro rakapa mutongo wekuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vatare zuva resarudzo musi wa 30 Nyamavhuvhu usati wapfuura munzvimbo nhatu dziri kuMatebelaland dzisina vamiriri dzinoti Bulilima East, Lupane East neNkayi.
VaMugabe vainge varamba kutambira mutongo wedare repamusoro rekuti vaite sarudzo idzi vachiti nyika haina mari.
Asi mutongo wakaturwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva, Justice Godfrey Chidyausiku, wakati VaMugabe vanofanira kutevedza mitemo yenyika.
Asi hazvina kunyatsojeka kuti mapato ari muhurumende yemubatanidzwa ari kuzokwikwidzana here musarudzo idzi.
Muchibvumirano chakaunza hurumende yemubatanidzwa cheGlobala Political Agreement, makanzi mapato aya haaikwikwidzana kwegore kubva zvakatanga hurumende yemubatanidzwa.
Izvi zvaiitirwa kuyedza kupodza maronda ainge aunzwa nemhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Asi veMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube vanoti pane chibvumirano chakaitwa muna 2009 paSADC Troika kuMaputo, Mozambique, chekuti mapato aya asakwikwidzane pahupenyu hwose hwehurumende yemubatanidzwa.
Vamwe vakaoma musoro muZanu-PF vave kutoti mudzimu waro bonga kuona huku dzichirwa nekudaro vave kupesvedzera VaMugabe kuti vadaidzire sarudzo dzenyika yose.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, VaSimpson Mutambanengwe, vaudza Studio7 kuti vachaita musangano naVaChinamasa negurukota rezvemari, VaTendai Biti, kuti vaone kuti voita sei nenyaya yesarudzo. Asi vati vakawana mari vakagadzirira kupinda musarudzo.
Muchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, vanonziwo nenhepfenyuro yeZBC vati zviri kuna VaMugabe kuti vaite sarudzo mumatunhu aya chete kana kuti munyika yose.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti mutongo waVaChidyausiku uri kunangana chete nesarudzo dzematunhu asisina vamiriri, idzo dzinofanirwa kuitwa, kwete sarudzo dzenyika yose.
Vanoongorora nyaya dzezvematogerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, VaSydney Chisi, vanoti VaMugabe voga havana simba rekudaidzira sarudzo dzenyika yose.